အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ - အဖြေများ | ဆိုက်ဘာ-လုံခြုံရေးပညာရှင်များ | ယင်း
23 မာ 2017
အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ - ဆိုက်ဘာ-လုံခြုံရေးပညာရှင်များများအတွက်အဖြေများ
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်နှင့်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတော်လေးခဲယဉ်းလိမ့်ထွက်လှည့်နေကြပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးအတွင်းခေတ်မီ cybercriminal စုစုပေါငျးမြားအဘို့, အန္တရာယ်များဖြေရှင်းများအတွက်ဓလေ့ထုံးတမ်းနည်းလမ်းကိုဘယ်တော့မှနောက်တဖန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလုံခြုံရေးမြင်ကွင်းတစ်ခုအပြောင်းအလဲများအဖြစ်တသမတ်တည်းသတ်မှတ်မြှင့်တင်ရန်အပျေါမှီခိုနေကြသည်။ သူတို့ကဖောက်သည်များကသူတို့လုံခြုံရေးနှင့်အန္တရာယ်အလုပ် upgrade ကိုကူညီအကြံပေးခြင်းများနှင့်အထူးပြုထောက်ခံမှုပေးပါ။ ဤတွင်ထိုသူတို့အားအနည်းငယ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါသည်:
သင်သည်သင်၏နေအိမ် system ပေါ်တွင်အဘယျသို့ရှိသနည်း
"SQL injection" ကဘာလဲ?
SSL ကိုဆက်သွယ်မှုနှင့် SSL ကို session တစ်ခုကဘာလဲ?
web server သို့အားနည်းချက်များဘာတွေလဲ?
Traceroute သို့မဟုတ် tracert ကဘာလဲ?
Linux ကို server ကိုလုံခြုံရေး: သုံးခုအဆင့်တိုင်း system ကိုလုံခြုံရန်
အဘယ်အရာကို salting ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကအသုံးပြုသွားမည်သလဲ?
SSL ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည် segment?
တစ်ဦးက SSL session ကိုပြည်နယ်တို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့် parameters?
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အိမ်မှာကြိုးမဲ့ Access Point secure မလဲ
Network မှကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုထောက်လှမ်းခြင်းစနစ် (NDIS) ဖော်ကျူး?
အဖြစ်ဝေးတစ် Active Directory Domain Controller, တစ်ဦးကိုပေး၏ Firewall ကိုယန္တရားနှင့်တစ်ဦးအသားတင်-ဆက်စပ်ပေါင်မုန့်ကင်ရာမီးဖိုကလေး, 14 Linux ကို Workstation မှတက်နိုင်သမျှဝေးလံခေါင်သီ nonexclusive switch ကိုအတူတစ်ဦးကို Windows ခရီးဆောင် PC ကိုတစ်ဦးတယ်လီဖုန်း။
မည်သို့ပင်သင်တစ်ဦးအပန်းဖြေ console ကိုချိန်ညှိသို့မဟုတ်သင့်ပထမဦးဆုံး PC ကိုသို့မဟုတ် program တစ်ခုရေးသားသကဲ့သို့အရေးပါစုဝေးလာသောအခါသင်၏စီမံကိန်းပထမဦးဆုံးအခါသမယသကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီသည်ဖြစ်စေ၏, ဤမေးခွန်းကို၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုသရုပ်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပြင်ဆင်နေဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကြားတွင်ပညာတတ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာအခြေခံဒေတာရဖို့ပရိုဂရမ်အားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ပုံမှန်ချေမှုန်းရေးမဟာဗျူဟာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ programmers ဝေးလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများကနေရရှိသွားတဲ့နှင့်အခြေခံ data ကို return ပွနျသောသူတို့ SQL မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှောက်သွားနိုင်သည့်မှတဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာမဆိုကွင်းဆက်ဖွင့်လှစ်စစ်ဆေးပါ။
SSL ကိုကွန်နက်ရှင် connection တစ်ခုချင်းစီတဦးတည်း SSL ကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ related သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးယာယီဖြန့်ဝေအပြန်အလှန်စာပေးစာယူကို interface ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်နဲ့ကြီးမားတဲ့လက်ဆွဲ protocol ကိုအားဖြင့် crated ဖောက်သည်များနှင့် server ကိုကြားဆက်ဆံရေးကဲ့သို့သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါသည်။
သူတို့ရှိသည်တစ်ခုခု (လက္ခဏာသက်သေ), သူတို့သိတစ်ခုခု (လျှို့ဝှက် key ကို) နှင့်သူတို့တစ်ခုခု (biometric) ။ ဤသည်စိစစ်ခြင်းသည်အချိန်အချို့ကိုအခါသမယအပေါ်တစ်ဦး PIN နံပါတ်နှင့် thumbprint နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြားမှ, လျှို့ဝှက်စကားလုံးနှင့်လက္ခဏာသက်သေ setup ကိုအသုံးချ။
အဖြူရောင် Box ကို-အားလုံးအချက်အလက်များကိုဖြာအားပေးပြီးမှနေကြတယ်, က Black Box ကို-အဘယ်သူမျှမဒေတာဖြာထိုသို့ပေးတော်မူကြပြီး Certified အခြေအနေမှာစနစ်စမ်းသပ်နိုင်, Grey ကထောင့်ကွက်-တစိတ်တပိုင်းဒေတာဖြာကျနှငျ့အတူရှိ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးတည်းကို တင်. ရန်လိုအပ်ပါတယ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။
ဝဘ်ဆာဗာကို exploit နိုငျသောပုံမှန်အားနည်းချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: ဖွဲ့မှုလွဲမှား နေ. , ပုံမှန်အပြင်အဆင်များ, အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုစနစ်နှင့်ဝက်ဘ်ဆာဗာများထဲမှာ bugs ။
သငျသညျဆက်သွယ်မှုအတွက်ပျက်ပြားပြီးခဲ့သည့်ပစ်မှတ်ပြောင်းရန်ရန်သင့်အားမှ switch မှကွန်နက်ရှင်၏ညာဘက်ကွင်းဆက်သရုပ်ပြဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးဘယ်မှာမှထွက်တွက်ဆရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
စာရင်းစစ်, ခိုင်မာစေ, လေးစားလိုက်နာ: တိုင်း system ကိုလုံခြုံရန်အဆင့်သုံးဆင့်။
သင်၏မေးခွန်းသို့သော်ရုံအသုံးအနှုန်း၏ကြီးမားသောအဘို့ကို အသုံးပြု. သင်ထွက်ဖမ်းရန်ကြိုးစားသည်ကိုလျှို့ဝှက်စကားလုံးဆားကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာစကားဝှက်တွေအတွက် encryption ကိုတစ်ဦးပိုမိုလုံခြုံမျိုးသည်နှင့်သင်သိနှင့်ရရှိရန်လိုအပ်မည်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
SSL ကို PC များနှင့်ဖောက်သည်များအကြားလုံခြုံမှုရှိတဲ့ connection စေရန်အသုံးပြုသည်။ လက်ဆွဲ protocol ကို, လျှို့ဝှက်ကုဒ်တွက်ချက်မှု, SSL ကိုမှတ်တမ်းတင် protocol ကို, ပြောင်းလဲခြင်း cipher အထူးအသေးစိတ်: SSL ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည် segment ကိုအပြီးရိုက်ယူခြင်း။
WEP ကိုလောင်သောအသံဝေးလံသောစနစ်များအတွက်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်မှပိတ် get တိုးပွားလာများအတွက် technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက SSL session ကိုပြည်နယ်ဖော်ကျူးသော parameters တွေကိုနေသောခေါင်းစဉ်: တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအမှတ်အသား, Compression ကိုမဟာဗျူဟာ, ရွယ်တူချင်းစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, မာစတာနက်နဲသောအရာ, cipher spec ။
လုံခြုံတဲ့ကြိုးမဲ့ Access Point နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းများတစ်ခုဌန်ရှိပါတယ်: အဆိုပါ SSID သို့ထုတ်လွှင့် WPA2 အသုံးချဖို့နဲ့ MAC address ကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါအသုံးချဖို့မဟုတ်သူတို့တွင်အများဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ကြသည်။
စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း, လျှို့ဝှက်, ခွင့်ပြုချက်, သမာဓိ, ရရှိနိုင် Non-disavowal, ခံနိုင်ရည်: လုံခြုံရေးစမ်းသပ်ခြင်းခုနစ်စရိုက်များပြီးနောက်တာရှိပါတယ်။
ဆိပ်ကမ်းများဒေတာအားလုံးမည်သည့်စနစ်ကတဆင့်ဝင်ရှိရာကနေအချက်ဖြစ်ပါသည်။ စနစ်အတွက်မဆိုကွင်းဆက်အဖွင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဆိပ်ကမ်း၏ scanning ဆိပ်ကမ်း scanning အဖြစ်လူသိများကြသည်။
တစ်ဦးက system ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စံချိန်များနှင့်လျှို့ဝှက် key ကိုဒေတာဝင်သို့ client ကိုဆွဲရန်, Facebook သို့မဟုတ်, Hotmail နဲ့တူကောင်းမြတ်ခြင်း site ကိုမှတစ်ရိုးသားတုပနေဖြင့်ဒေတာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီလှည့်စားလေ့ရှိတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများကတစ်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသင်ကြားပို့ချလူတန်းစားများကြားတွင်ဒီဖောက်သည်အောက်မေ့စေဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။
ဒါဟာလူသိများတိုက်ခိုက်မှုနှင့်အတူကကိုက်ညီဒါ့အပြင်အဆိုပါ Sub-အသားတင်နှင့်အပေါ်လှုပ်ရှားမှုဖြတ်သန်း၏ finish ကိုစာမေးပွဲများအတွက်အသုံးပြုသည်။ မည်သည့်ကွင်းဆက်ကွာဟမှုအသိအမှတ်ပြုသောဖြစ်ရပ်အတွက်ထို့နောက်စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးသတိပြုဖို့လိုရရှိသွားတဲ့။
systems ကို web server ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမျှော်လင့်ဖို့အသုံးပြု?
ဒါကြောင့်အပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ကို web server software ၏ဘေးကင်းလုံခြုံတပ်ဆင်ခနှင့် configuration, အသုံးမပြုတဲ့နဲ့ default အကောင့်ကယ်ဆယ်ရေး, ဝေးလံသောအဖှဲ့အစညျး Handicap Fix နှင့်။
HIDS သို့မဟုတ် Host ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုထောက်လှမ်းခြင်းစနစ်ပစ္စုပ္ပန်စနစ်၏ပုံဖော်တင်ဆက်အတိတ်စမ်းကြည့်ရှုရန်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေခံစာရွက်စာတမ်းများနှိုးဆော်သံစီမံခန့်ခွဲသူထံသို့စေလွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဖျက်ခဲ့ကြပါလျှင်၎င်းသည် check လုပ်ပေးပါတယ်။
Splunk လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - အင်တာဗျူးမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ